Tag: pepsi | Martech Zone
Ny fomba hanovan'ny Symbiose an'ny marketing nentim-paharazana sy nomerika ny fomba fividianantsika zavatra
Alahady 28 Febroary 2021 Alahady 28 Febroary 2021 Diogo Voz
Ny indostrian'ny marketing dia mifamatotra lalina amin'ny fitondran-tenan'ny olombelona, ​​ny fanaony ary ny fifandraisany izay manondro ny fanovana ny dizitaly nandritra ny dimy amby roapolo taona lasa. Mba hitazomana antsika handray anjara dia namaly an'ity fanovana ity ny fikambanana tamin'ny fanaovana ny paikadim-pifandraisana nomerika sy media sosialy ho singa iray lehibe amin'ny drafitry ny varotra ataon'izy ireo, nefa toa tsy nilaozana ireo fantsona nentim-paharazana. Fampahalalana mahazatra momba ny varotra mahazatra toy ny takelaby, gazety, magazine, fahitalavitra, radio, na flyer miaraka amin'ny marketing nomerika sy sosialy
Inona no atao hoe Slogan? Teny fanevan'ireo marika malaza sy ny fivoarany
Sabotsy, Desambra 13, 2014 Zoma, Desambra 12, 2014 Douglas Karr
At DK New Media, ny teny filamatray dia ny hoe Manampy ireo orinasa hahay hamokatra izahay. Izy io dia mifanaraka amin'ny serivisy isan-karazany atolotray - manomboka amin'ny fakan-kevitra momba ny vokatra, hatramin'ny fampandrosoana atiny, amin'ny fanatsarana ny varotra an-tserasera… ny zavatra rehetra ataontsika dia ny mamantatra ireo banga amin'ny paikady ary manampy ireo orinasa hameno ireo banga ireo. Mbola tsy lasa lavitra loatra izahay raha ny fanaingoana azy io, ny famoronana horonantsary malaza na ny fampidirana vazivazy… saingy tiako ilay hafatra hoe
CrowdTwist dia manolotra sehatra marika fotsy, analytics efa ela ary fitaovana fitantanana sy fitaterana feno hampidirina, handefasana, hitantanana ary hampitomboana ny ezaka fananganana marika anao. Vao haingana izahay no nanao tafatafa tsara niaraka tamin'i Irving Fain teo an-tsisin'ny Internet Radio ary nanome anay fahitana amin'ny orinasa iray izay tena misy fiatraikany amin'ny marketing sy valisoa ampitan'ny orinasa. Fanentanana CrowdTwist X Factor Raha te hahita ny fomba fanaraha-maso tsara ianao, fanentanana nasionaly no atao, aza mitady
Ny tsiambaratelon'ny fananganana ny marikao toa an'i Nike na Coca-Cola
Alatsinainy 15 Febroary 2010 Alahady, Martsa 24, 2013 Grant Lange
Ao amin'ny firafitry ny marika amerikana, dia misy karazany roa ihany ny marika: mifantoka amin'ny mpanjifa na mifantoka amin'ny vokatra. Raha hanao asa mucking miaraka amin'ny marikao ianao, na mandray karama amin'ny muck miaraka amin'ny marika olon-kafa, fantatrao tsara hoe inona ny karazana marika anananao.
Mandatsaka ny Super Bowl amin'ny haino aman-jery nomerika
Sabotsy, Desambra 26, 2009 Zoma, Jona 9, 2017 Douglas Karr
Mihamaro ny orinasa mandray ny teknolojia raha ny paikadim-barotra no resahina. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny Super Bowl i Pepsi dia niantso azy io ho mpiloka ny mpanao gazety nentim-paharazana. Tsy filokana ve ny fanaovana doka amin'ny Super Bowl? Marina? Ny dokam-barotra Super Bowl dia mitentina $ 3 tapitrisa dolara isaky ny 30 segondra. Pepsi dia nanomana doka 30 afovoany sy doka 60 segondra… 12 tapitrisa dolara izany. Ary ny vidiny dia niakatra 10% teo anelanelan'ny 2008 sy 2009. Andao